समाज सुधारको जिम्मेवारी मेरो काँधमा ! – HamroKatha
समाज सुधारको जिम्मेवारी मेरो काँधमा !
हामीले समय अनुकुल रहदैं स्वयमको स्व-विवेकबाट आज क्रियाशील बन्न सक्नु नै भोलीको सफलताको आधार तय गर्नु हो I
ईश्वर लुईंटेल २०७५ पुष १२ गते १७:३१
स्वाभिमानताको स्वर्णिम गोरेटोबाट गुज्रिएका हामी नेपाली आज इतिहासकै गर्विलो आयाममा छौ। अब, विशेष गरी हामी युवाको काँधले यो घडीमा स्वर्णिम इतिहासको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने संवेदनशीलता छ। हिजोको ज्ञानलाई आजको ऊर्जा द्वारा भोलिको इतिहास रच्ने आधार कोर्नु छ। हामी ती वीर-पुर्खाका सन्तान! हाम्रो नशा-नशामा वीरता कै रगत बगिरहेको छ। यो त्यही रगतको तागतलाई हतियार बनाएर यो सुन्दर देशलाई सम्बन्धित गहना पहिराउन सके मात्र हाम्रो जीवनले यो देशको नागरिक हुनुको सार्थकता प्राप्त गर्ने छ। अनि जुनी-जुनीका निम्ति हाम्रो नाम स्वर्णिम अक्षरले लेखिने छ। र त्यही नाम हाम्रा सन्ततिले गर्वका साथ आफ्नो ऊर्जा बनाउने छन्।
यो देशले त हामीलाई आफ्नू काख थापिदियो, हामीलाई हाम्रो पहिचान दिलाइदियो। अनेकौँ प्राकृतिक आयामले पूर्ण गराइदियो। संसारकै सर्वोच्च शिखर, शान्तिका अग्रदूत, वीर-बिरंगना पुर्खा, प्रकृतिका सप्तरंगी आयाम; देशले हामीलाई आफ्नू तर्फबाट के कुराले चाहिँ अपुग गराएको छ?
जुन यो संसारका अन्य देशसँग छ? हाम्रो देश भन्दा धेरै अन्य कुनै देशले दिएको छैन, आफ्ना सपुतलाइ! यद्यपि अन्य देशका सपुतले भने हामीभन्दा धेरै आफ्नू देशलाई दिएर आधुनिकताको चरम चुली चुमेका छन्। हाम्रा पुर्खाले जसरी आफ्नू स्वाभिमानका निम्ति आफूलाई सुम्पिए हो त्यही इतिहासको घडी हाम्रा निम्ति चुनौती बनेर हामीलाई नै गिज्याइ रहेको छ आज!
अर्काको घरमा पाकेको मासु-भात सँग लोभिएर आफ्नो घरमा पाकेको गुन्द्रुक-भात हेर्दै विलाप गरेर हामी सन्तुस्त हुन सक्दैनौ । त्यो त केवल असन्तोषको डकारबाट जन्मिएको परनिर्भरता मात्र हो । आज हामी इतिहासको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा छौ । हाम्रा पुर्खाले आफ्नू बहुबलमा कठिन युद्ध लड्दै हाम्रो स्वभिन उच्च राखे, अनेकौँ कला-साहित्य र ज्ञानका युगौरुप स्तम्भ निर्माण गरिदिए, हाम्रै स्वतन्त्रका निम्ति अग्रजले आफ्नू पुरै जीवन खर्चिएर हामीलाई स्वतन्त्र बनाइदिए ।
अब हाम्रो काँधमा एउटै जिम्मेवारी छ। जुन जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्न नसके हाम्रा पुर्खाको गौरवको मूल्य-मान्यताको हाम्रै हातले हत्या हुनेछ। अनि हाम्रा सन्ततिले हामीलाई धिक्कार्ने छन्। सँगै हाम्रो पुर्खाको देन, सार्वभौम स्वाधीनता र आजका हाम्रा अग्रजले रोपेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हुर्कँदै गरेको टुसोको श्राप हामीलाई लाग्ने छ । यो देशको समुन्नतिका निम्ति हामी युवाले अब, घोत्लिदै पर्छ । आज सम्म तयार भएका आधारमा टेक्दै हिजोको ज्ञानमा आजको ऊर्जा मिसाएर भोलिको आधार तयार पर्न सक्नु नै हामी सम्पूर्ण नेपाली युवाको आजको चुनौती हो ।
७ असार , २०७६ ४ मिनेटमा पढिने
२ फागुन , २०७५ १ मिनेटमा पढिने
डाक्टर आमा नजिक गएर भन्नुभयो,”बाबुको अप्रेसन सफल भयो”
२४ मंसिर , २०७५ ५ मिनेटमा पढिने